यी कुरा सिकौं कम्प्युटरबाट - Nepali Virals
२३ श्रावण २०६९, मंगलवार १४:१२	428 पटक-पढिएको
डिफ्र्याग्मेन्ट गर्ने भनेको कम्प्युटरका फाइलहरुलाई व्यवस्थित गर्ने हो। कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभलाई नियमित रुपमा डिफ्र्याग्मेन्ट गर्ने हो भने कम्प्युटरको गति तेज हुन्छ। डिफ्र्याग्मेन्ट गर्दा कम्प्युटरले त्यसमा रहेका अनावश्यक र टेम्पोररी कुराहरु हटाएर आवश्यक फाइलहरुलाई आवश्यक ठाउँमा राख्छ ताकि आवश्यक समयमा सहज रुपमा पाउन सकिओस्।
जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मानिसले पनि यस्तै खालको काम गर्नु जरुरी हुन्छ। यस्तो काम नियमित गर्ने होभने जिवन धेरै सहज हुन्छ। एक महिनाको एक पटक मात्र यस्तो खालको गतिविधि गरेर हेर्नुस् दैनिकी र परिवेशलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया आवश्यक भएको आफै महसुश हुन्छ। यस्तो खालको क्रियाकलापलाई नअपनाएको खण्डमा अव्यवस्थाका कारण हुने धेरै हानीहरु छन्।
२. खाली रिसाइकल बिन
कम्प्युटर चलाउँदा अनावश्यक लागेका फाइदा जसरी डिलिट गरेर रिसाइकल बिनमा राख्ने गर्नुभएकै होला। याद राख्नुस् यसो गर्दा पनि कम्प्युटरबाट त्यो फाइल हटिसकेको हुँदैन। रिसाइकल बिनमा पनि सुरक्षित रुपमा नै रहेको हुन्छ। जुन सजिलै रिस्टोर गर्न सकिन्छ। यसखालको रिसाइकल बिन हाम्रो घरमा पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। स्टोर तथा भण्डार कोठा घरका रिसाइकल बिन हुन्। यदी काम नलाग्ने र अनावश्यक सामान छन् भने स्टोरमा होइन घरबाटै निकाल्नर्ुपर्छ। अनावश्यक कुराहरु घर र मनबाट बाहिरफाल्ने गर्नुपर्छ। जसरी रिसाइकल बिनमा रहेका फाइलले कम्प्युटरको स्पेश खाइरहेको हुन्छ त्यसरी नै मन र घरमा रहेका अनावश्यक विकारले पनि तपाइँको मस्तिष्कको क्षमता र कार्यक्षमतालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
३. सबै जम्मा गर्ने होइन
कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउँदा धेरै जानकारी, सूचना र फाइलहरु भेटिएका हुन्छन्। कतिकुरा साह्रै राम्रा लागिरहेका हुन्छन् भने कति पढ्दाका रमाइला मात्र। तर इन्टरनेटमा भेटेका सबै सामग्री डाउनलोड गरेर कम्प्युटरमा सेभ गरिएको हुँदैन। त्यस्तै घरमा पनि आफूलाई राम्रा लागेका र रमाइला कुरा भन्दै सबै कुरा जम्मा पार्ने होइन। कतिपयको बानी केही कुरा राम्रो लाग्यो या भविष्यमा काम लाग्छ भनेर घरमा संग्रह गर्ने बानी हुन्छ। जसले गर्दा घर वा कोठामा अनावश्यक सामानहरुको ओसारो पर्छ। जसले गर्दा आवश्यक परेको चिज समयमा पाउन सकिन्न। त्यसैले व्यवस्थित रुपमा राख्नका लागि आफूलाई तत्काल चाहिने कुरामात्र राख्ने। भोली चाहिन सक्छ भन्ने खालका कुराहरु नराख्ने।
कम्प्युटर तथा ल्यापटप तथा मोबाइल चलाउँदा पनि त्यसमा रहेका सबै डाटाको सुरक्षाका लागि अति आवश्यक कुराहरुलाई अन्य ड्राइभ तथा छुट्टै माध्यममा सेभ गरिएको हुन्छ। त्यही प्रक्रिया आफ्नो दैनिकी र जिवनमा पनि अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। जस्तो ड्राइभिड लाइसेन्स, बिमा पोलिसी, प्यान कार्ड, शैक्षिक तथा प्राविधिका प्रमाणपत्रहरुको कम्तिमा पनि एउटा भएपनि फोटोकपी ब्याकअप राख्नुपर्छ।
५. नयाँ सुरुवात
विभिन्न कारण तथा समस्याका कारण एक वा दर्ुइ पटक कम्प्युटर त पुरै फरम्याट गर्नु भएकै होला। कहिलेकाहिँ कम्प्यटरमा यस्तो समस्या देखिन्छ जसमा सबै कुराहरु फेरी सुरुबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरका सबै ड्राइभ फरम्याट गरेजस्तै जिवनमा जुन कुनै पनि समयमा त्यस्ता मोड तथा समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन् जसले तपाइँको करिअर तथा व्यवसायको यात्रालाई पनि फरम्याट गरेर पुनः सुरुबाटै थाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ। साथै जसरी एकपटक कम्प्युटर पुरै फरम्याट गर्न परेपछि अर्को पटक त्यसखालको अवस्था नआओस् भनेर सावधान भइन्छ त्यसरी नै जिवनमा पनि हरेक खालका निर्णय लिँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ।
अघिल्लो डाउनलोड लण्डन ओलम्पिक एप्स
पछिल्लो डबल क्लिक गर्दा ड्राइभ खुल्दैन? यो तरिका अपनाउनुस्
अगस्ट 7, 2012 at 6:03 अपराह्न
Sir information technology related tips haru ramro lago, yesari nai rojgari sanga related tips haru pani include garnu pls.
Durga Prasad Gyawaliलाई जवाफ दिनुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्